IXiaomi Mi A3 sele inosuku lwentetho eSpain | I-Androidsis
IXiaomi Mi A3 sele inosuku lwentetho eSpain
Ukuba kukho ifowuni evelisa iindaba kwiintsuku zamva nje, yiXiaomi Mi A3. Ukuvuza kuye kwavela esivumele ukuba sazi ezinye iinkcukacha zoku phakathi kuluhlu nge-Android One evela kuhlobo lwesiTshayina. Ukongeza, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kunokuba yeyiphi usuku lokufayilisha ngokusemthethweni ePoland. Sele sinomhla wecala laseSpain.
Kule meko, kuya kufuneka senjenjalo linda kancinci ngaphantsi kwimeko yePoland. Kodwa okucacileyo kukuba le Xiaomi Mi A3 sele ikufutshane kakhulu ukuba ibe semthethweni kwaye siya kuba nakho ukwazi yonke into eyenziwe ngulamzi waseTshayina ngesi sizukulwana sitsha nge-Android One.
Ngokwedatha entsha, intetho esemthethweni yeXiaomi Mi A3 ibanjwe nge-17 kaJulayi. KwangoLwesithathu ofanayo, le fowuni intsha yohlobo lwaseTshayina iya kuba semthethweni, kumsitho oza kubanjelwa eMadrid. Ngumpu wokuqala wale fowuni yohlobo lwesiTshayina eYurophu.
Inkampani ngokwayo sele ikhuthaza lo msitho kunxibelelwano lwasentlalweni. Nangona ukuza kuthi ga ngoku abakasishiyi nefoto esemthethweni okanye iinkcukacha malunga nale fowuni. Kwakhona, akukho nto ikhankanyiweyo malunga nobukho bemodeli yeLite ngaphakathi kuluhlu. Ukuza kuthi ga ngoku akukho nto sele ivuza ngayo.
Ngethamsanqa, kungekudala siza kuphelisa ukuthandabuza malunga noku. Ukusukela umsitho wokubonisa wale Xiaomi Mi A3 ubanjwe ngomso. Kwinto esinokuyibona yintoni uphawu oluthandwayo lwaseTshayina olulungiselele thina nesi sizukulwana sitsha. Emva kweziphumo ezilungileyo ezibini ezidlulileyo, kukho ulindelo olukhulu.
Siza kuba kulo msitho, ke Siza kukuxelela yonke into malunga neXiaomi Mi A3. Inxalenye yokubalulwa kwayo ibivuza kwezi ntsuku. Nangona kude kube ngoku asazi nto malunga nexabiso okanye umhla wokuqaliswa kwesixhobo esiya kuba nalo kwilizwe lethu. Kule meko siza kushiya amathandabuzo sele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi A3 sele inosuku lwentetho eSpain
I-Android Q iya kuzisa imisebenzi ye "Tasker" kwiselfowuni ukuyenza ibe "smart" ngakumbi
I-Honor 9X Pro ibonakala ngokusemthethweni kwi-teaser evezwe yinkampani